दोहोरीको स्टेज र बाहिरको स्टेज दुबै दमदार लाग्छ : गायक योगेश लामा – Everest Times News
‘कुटु कुटु खाइरहने मुटु’ गीतबाट चर्चामा आएका गायक योगेश लामाले दर्जन गीतमा स्वर दिइसकेका छन् । सेलो, आधुनिक र दोहोरी गीतमा रुचि राख्ने लामा लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् ।
संगीतमा पनि दखल योगेशले आधा दर्जन गीतमा संगीत दिइसकेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाँसबारीमा २०४६ भदौ १७ गते जन्मिएका लामाले बिकमसम्म अध्ययन गरेका छन् । संगीत भने उनी हाल साधनारत नै छन् । सांगीतिक यात्राका लागि थाइल्यान्ड र चीनसम्म पुगिसकेका लामा हाल दोहोरी गायनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । गायक लामा नयाँ दोहोरी गीत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । उनै गायक योगेश लामासँग एभरेस्ट टाइम्सले गरेको कुराकानी:
कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
सांगीतिक कार्यक्रमतिरै व्यस्त छु । दोहोरीमा गीत गाउँछु । नयाँ दोहोरी गीत ल्याउने तयारी छ । तीजपछि ‘छड्के नजर, गाँजलु आँखा’ बोलको गीत ल्याउँदै छु । स्मृति गौतमले साथ दिनुभएको छ ।
कस्तो गीत गाउन रुचाउनुहुन्छ ?
विशेषगरी लोकबेसीको गीतहरु गाउँछु । सेलो, लोकदोहोरी, आधुनिक गीत गाउँछु । तामाङ ठिटो, अस्याङकी छोरी, अम्मैले होई अम्मैले सेलो गाए । प्रिती आलेसँग फ्युजन सेलो गाएको छु । इन्दिरा गोलेसँग ‘कुटु कुटु खाइरहने मुटु’ गाएँ । दाजु कृष्णगोपाल तामाङको शब्द र संगीत रहेको स्वदेश गान ‘हे इश्वर फेरि फर्की ल्याउ’ गाएँ ।
संगीतमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ ?
संगीत र गायनको नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले पनि म संगीतमा पनि रुचि राख्छु । आफ्नै केही गीतहरुमा संगीत दिएको छु । सेम्ला माया ठुली, ह्याङ्ला ल्होछार, आधुनिक गीत म त तिम्रो नजरबाट बिलाएको मान्छे जस्ता आफ्नै गीतमा संगीत दिएको छु । अरु गीतहरुमा पनि संगीत दिएको छु । संगीत र गायन दुबै विषयको विद्यार्थी हुँ म ।
दोहोरीका लाइभ स्टेज दमदार लाग्छ कि बाहिर भएको स्टेज कार्यक्रम ?
दुबै बराबार हुन् । म दोहोरी गाएर आएको हुनाले पनि दोहोरी मलाई प्रशिक्षण गराउने ठाउँ हो । स्टेजमा दर्शकको माया पनि त्यतिकै पाइन्छ । त्यसैले दुबै बराबर । खोलो तर्‍यो लौरो त बिर्सन भएन नि ।
कसरी आउनुभयो गायनमा ?
स्कुलमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो । म गायन कम्पिटिसनमा भाग लिइरहन्थे । त्यसमा जितिरहने । त्यसले गर्दा पनि गायनतिर तानिएँ । कृष्णगोपाल दाईको प्रेरणा पनि हो । सानोमा नारायण गोपाल र राजु लामाको गीतले प्रभावित बने । बुवाले क्यासेट ल्याउनुभएको थियो । त्यही क्यासेटमा झुम्थे ।
संगीतलाई नै निरन्तरता दिनुहुन्छ ?
यही नै छ अहिलेसम्म । यसैमा बाँचेको छु । अरु बाटो सोचेको छैन ।
गायनको पहिलो कमाईले के गर्नुभयो ?
सबैभन्दा पहिले गीत गाउन दार्जिलिङ सिक्किम पुगेको थिएँ । त्यतिबेला ३५ हजार रुपैयाँ पाएको थिएँ । पैसा त आयो तर सबै घरखर्चमा सकाएँ । सम्झनालायक खासै केहीमा खर्च गरिएन ।
गायनबाट सम्मान पुरस्कार कतिको पाउनुभएको छ ?
अहिलेसम्म २ वटा सम्मान पाएँ । तामाङ ठिटोबाट बेस्ट सेलो सिंगरमा इपिक म्युजिक अवार्ड २०७५ पाएँ । त्यसैगरी कतारमा भएको हिमालयन इन्टरनेसनल अवार्ड २०७५ अस्याङकी छोरबाट अवार्ड पाएँ ।